Wabuyisa umbhalo wesiHeberu | Izincwadi Zamanje
Umbhalo wesiHeberu owawuntshontshwe eminyakeni engaphezu kwengu-10 edlule utholakele. Umbhalo uqanjwe Incwadi Yokukhulekelwa KwamaLevi Sekuphele iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili ikhona futhi iphakathi kwamanani abaluleke kakhulu kumasiko amaHeberu.
Ukulahleka kwale ncwadi kwaqinisekiswa ngesikhathi kusungulwa uhlu lwezimpahla ngo-1998 ku Umtapo Wezincwadi kaMasipala waseRamban lapho umbhalo wawukhona.
Incwadi Yokukhulekelwa KwamaLevi Umbhalo wesandla owabhalwa ngonyaka we-1793 futhi osebenza ngoMthetho wamaJuda. Iziphathimandla zomtapo wolwazi zabika ukubanjwa inkunzi emaphoyiseni enza uphenyo oluningi, kodwa konke akuphumelelanga.
Eminyakeni eyalandela, kwaziwa ukuthi le ncwadi yayifakwe endalini ENew York bese kuthi itholwe ngumthengisi wegama elingaziwa, kepha kamuva umkhondo wakhe wabuye walahleka futhi.
Kuze kube, ngo-2005, isikhulu se- Umtapo Wezincwadi Kazwelonke wakwa-Israyeli ithole incwadi ku Umtapo Wezincwadi Kazwelonke waseJalimane. Ngemuva kokuthi ongoti sebenqume ukuthi ngempela bekungumbhalo webiwe, iziphathimandla zaseJalimane zanquma ukubuyisela le ncwadi emtatsheni wezincwadi wakwa-Israyeli lapho yayantshontshwa khona eminyakeni eyi-10 eyedlule.
Isiko lamaHeberu, imibhalo kanye nezincwadi zayo, akuyona nje kuphela eminye yemibhalo emidala kunayo yonke egciniwe, kepha futhi ingenye yezinsika zempucuko yaseNtshonalanga. Kusuka kubantu abangamaJuda namasiko (kanye nakwisiko lamaGrikhi), okuhlangana kamuva nenkambiso yobuKristu, kuza ingxenye enkulu, uma kungeyona yonke, yamagugu nemiqondo yempilo yethu yansuku zonke. Ngakho-ke, lokhu kutholwa akulona iqiniso elincane. Ngaphezu kwalokho, ukutholakala kombhalo olahlekile kuhlala kuyisizathu senjabulo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » Wabuyisa umbhalo wesiHeberu
U-Lorraine machuca kusho
Futhi uyazi ukuthi ngubani owebile?
Phendula uLorena Machuca
Uma nginombono, ngingabhala umsebenzi wokubhala mayelana nokucabanga kwabantu bezwe ngalinye futhi ngenze inoveli ehlukile kakhulu yokuthengisa ngokuthengisa, ukulahleka, nokuqhakaza kwezingqondo ezintsha nobuhlakani.